xayaysiiyaha xalaasha. – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
xayaysiiyaha xalaasha, xurma udoonaha xalaasha, tollow imisay socon xayaysiinta iyo xayndaabka lagu hayo bulshooyinka ay hogaanka u yihiin maryawaynta ka shidaal qaadata boqortooyada sacuudi arabia?
Mudo aan sidaa ufogayn ayaa wadaad yari, khudbad ula kala baxay, wax uu markaaa ku sheegay kala saarida xalasha ixo xaaraanta. Deedna ka bilobay xayasiinta hilbka Afartan iliglihii dhurwaaga ‘waraaba’ ahaa .
kabasii darane midkalaa soo booday. oo isna kamabuu yaraysan kii horee; basashii iyo xulbadii iyo geed madoobihii xabatu sawde ahaa, liin ku qooshta nayiri. kadaroo dibi dhal, waxaaan sugnaaba waa mid inoo xayaysiiya hilib dacawaadka ‘dawaco’ iyo dabacasihii Danyeer ahaa!!.
inteena sida malin laha ah Muuqbaahiyayaasha fiirsigooda joogteeya, waxaynu inbadan kadalacannaa dadyow inbadan loo carbiyey; ku qancinta hadba wixii alaabooyin gacanta lagasoo qaaday, si adigaagaa dhugtaha ahi ugu dhiiratid ibsigooda .
waxa taa iyana barbar socday, caanamaladii ugu danbeeyey xayaysiino loo sameeyey dawlado, iyadoo lagu maldahayo arimo diineed; taas oo ujeedku uun yahay danaha iyo sama katalinta duubweynta horboodaya dawladahaa . Mudo aan sidaa usii fogayn, waxay barlamaanka boqortooyada qaadirku doortay, ee saudi arabia si aan saxaafadu aanay soo bandhigin u an sixiyeen, qodob qarniyo badan degaankaas kareebanaa. Iyadoo loo daliishanayo qodobo diimeed lama taabtaan markaa ay ku sheegeen.
waxa iswaydiin leh hadaba ansixinta iyo xashaashaqa bilihii udanbeeyey kajirey majaalista umuurada ay ka go’do talooyinka dalkaa, xagay kamareen daliiladii ay qarniyo badan ku mamnuucayeen qodobkaa isaga ah?!
hadaba akhristow aynu gudaha usoo galno, islana fahano ujeedka qormadan gaaban.
si aynu isula fahano duxda iyo bud-dhaca qormadeena caawa, waxa lama huraan ah inaynu wax yar isaga iftiimino, dhacdadii afkala qaadka ku noqotay dadyow badan oo ay bulshadeenu badankood kamid tahay, cajab iyo layaabna ku noqotay, taas oo ahayd fasixida iyo ansixintii ay qalinka ku duugeen golaha barlamaanka reer alla sucuud; ee ahayd inay haweeni hogaanka uqaban karto gaari si bilaa muxrima, cajiib!!!!!!!
inkastoo arinkani aanuu ugub ku ahayn geyiga somaliyeed ee hodonka ku ah karaamaynta haweenka ,se loo soo dirayaashi (waa Gar-mutuxanayashe), dulaynta iyo dacaraynta dhaqankeenii suubanaa ee ab ka-ab aynu kusoo caano maalnay; iyagoo ka dhex eeganaya qutulyoomka maalinlahooda, uguna garaabeen kagana hadli waayeen dhacdadaas ay u arkan ugub inay ku tahay diinta , waxaa halkaas inooga muuqanaya abaabulka iyo faragalinta lagu hayo diinteena suuban………………